Ọkachamara Ọmịlị Na-ekwu Banyere Ụdị Backlinks
Ịntanetị na-enye usoro ikpo okwu maka ọtụtụ ọrụ. N'ihe gbasara e-azụmahịa, otu onye nwere ike ịrụ ọrụ ọrụ ntanetịahịa maka ebe nrụọrụ weebụ ha. Imirikiti ndị nna weebụ na-adabere na nkà na ụzụ ahịa dị ka azụmahịa azụmahịa yana Social Media Marketing (SMM) - quanto custa hospedagem de site. Ka ndị mmadụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ahịa ha, ndị mmadụ ka na-ebi n'akụkụ ha nke idebe weebụsaịtị ha.
Nyocha Ịchọ Nchọnchọ ( SEO ) bụ usoro ahịa ahịa dijitalụ nke na-adabere na ogo saịtị weebụ na engines ọchụchọ maka ezigbo ihu ọma. SEO jiri usoro ahia ahia di iche iche dika nyocha nke okwu, ihe ndi ozo di iche iche na nkwado. Backlinking bụ usoro SEO nke nwere ike ịba uru. Mgbe ị na-eme SEO maka ụlọ ọrụ gị, ọ dị mkpa ịmara ụdị azụlinks dị iche iche maka maka azụmahịa ọ bụla.
Ụfọdụ n'ime ụdị backlinks dị n'usoro nduzi a nke Onye Ahịa Nwee Ihe Nlekọta nke Shiol , Max Bell:
Nolinklow na do-follow backlinks
Mgbe ụfọdụ, ịnwere ike ịchọta backlink site na weebụsaịtị ma ọ bụ ngalaba site na iji eriri ajụjụ ajụjụ..N'okwu a, ihe "rel" pụtara na Google nwere ike ikpebi ụdị backlink nke ị na-eji na ebe nrụọrụ weebụ gị. Iso ihe ndi ozo nwere ike inyere aka gi aka na Google search engine ngwa ngwa. Otú ọ dị, ị nwere ike ịnwe ụfọdụ nsogbu mgbe ị na-eji ụfọdụ njikọ ndị ọzọ, karịsịa na Google. Ndị a backlinks nwere abamuru ha na algọridim nke engines ọchụchọ ndị ọzọ dị ka Bing ma ọ bụ Yahoo.
Njikọ anụ ọhịa na SEO
Mgbe ị na-eme SEO, ọ dị mma ịtụle isi iyi njikọ. Njikọ aka bụ ndị sitere na isi mmalite ndị dị mma. Backlinks nwere ike inye ebe nrụọrụ weebụ gị ezigbo ebe isi ahia na-eme ka saịtị ahụ mepụta uru dị mma na engines ọchụchọ. Njikọ ndị na-ekwekọghị n'okike SEO nwere ike ime ka saịtị na-enweta ntaramahụhụ siri ike nke njikwa ọchụchọ. Njikọ ndị a sitere na nwa ojii SEO ụlọ ọrụ ndị kwere nkwa ịkwụ ụgwọ backlinks iji bulie saịtị ngwa ngwa. Zere njikọ dị otú ahụ n'ihi na ha nwere ike iduga deindexation nke saịtị gị site na SERPs.
Njikọ ndụ ma ọ bụ ịgbaziri agbazinye
Isi iyi nke backlinks dị mkpa mgbe niile. Njikọ ndị ziri ezi na-enye ohere maka ihe ndị ọzọ, na-eme ka ndụ dị na backlinks. Akụkụ a bụ echiche nke ụlọ ọrụ na-enwe ọganihu na-eji mee ihe ịga nke ọma. Njikọ ụlọ ọrụ sitere na isi mmalite dịka njikọ ndị akwụ ụgwọ. Ndị a backlinks bụ niile njikọ ndị ọzọ nke nwere isi iyi, Ntuziaka spam ngalaba. Ha nwere ike ịbụ ụzọ ụgbọ okporo ígwè na-anaghị ere ahịa.
Nyocha Ịchọ Nchọpụta bụ usoro dị mkpa nke ịme ihe omume n'ịntanetị. Dịka ọmụmaatụ, SEO na-enye ohere ka ndị mmadụ nwee ọtụtụ ebe ndị ahịa na-edebe ihe n'Ịntanet yana ịchọta ndị ọbịa ndị si n'ọtụtụ akụkụ na weebụ. SEO sitere na otutu ụzọ na usoro. Na ụdị SEO ọ bụla, backlinks bụ ihe na-eme kwa ụbọchị ndị nna weebụ nwere ike ịchọta n'ime atụmatụ atụmatụ ịntanetị ha. Na